Hey,adda taya-dhowrka dalka iyo Mamulka Rugta Ganacsiga oo manta kulan horudhac ah xarunta Rugta Ganacsiga. - Somali Chamber of Commerce and Industry
Home » News » Hey,adda taya-dhowrka dalka iyo Mamulka Rugta Ganacsiga oo manta kulan horudhac ah xarunta Rugta Ganacsiga.
Hey,adda taya-dhowrka dalka iyo Mamulka Rugta Ganacsiga oo manta kulan horudhac ah xarunta Rugta Ganacsiga.
Hey,adda taya-dhowrka dalka iyo Ganacsato uu Hogaaminaayaan mamulka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed oo manta kulan horudhac ah ku yeeshay hoolka xarunta Rugta Ganacsiga.
Kulan kaan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Agaasimaha guud ee Rugta Ganacsiga mudane Abdi Abshir Dhore waxana kasoo qeyb-galay Madaxda sare ee Hey,adda taya-dhowrka dalka, iyo qaar kamid ah ganacsatada dhoofka iyo soodajinta badeecadaha kala duwan.
Agaasimaha guud oo ugu horeen goobta ka soo jeediyay warbixino muhiim ah ayaa ka hadlay baahida loo qabo Hey,adda Taya-dhowrka iyo fa,idada ay dalka uleedahay asaga oo sheegay in ganacsatada ay baahi balaaran uqabaan. Sido kale waxa uu sharaxaad guud kabixiyay sida ay uwada shaqeeyn ugu dhaxeyso Rugta Ganacsiga, iyo Hey,adda Taya-dhowrka oo loo soogaabiyo SOBS. Agaasimaha oo kula dardaarmay in ay qeybaha wax soo sarka dalka oo ay caqabadi ka heysatay dhanka tayada dhofinta, sida beeraha, kalunka, xoolaha iyo guud ahaan in ay hormariyaan ganacsiga soomaaliya.
Waxaa ayagana dhankooda goobta ka hadlay Guddoomiyaha Hey,adda taya-dhowrka dalka iyo maareeyaha, waxa ayna ganacsatada ka codsadeen in si hufnaan ah lola shaqeeyo, ayaga oo ka warbixiyay shaqadda Hey,adda heerarka ay soo martay, iyo guud ahaan sida ay ula tacaamuli doonan ganacsatada iyaga oo sheegay in ay marka hore siin doonan tababaro laxariira tayada kadibne ay laxisaab tami doonan.
Dhanka kale qaar kamid ah ganacsatadii kulanka kaso qeyb gashay ayaa aad ubogadisay iyaga oo sheegay in bahi loqabo Hey,adda, ayna lashaqeyn doonaan, waxa ayna ka war-bixiyen in ay kala kulmaan ganacsigooda dhibaato, la xariirta taya-dhowr la,aanta, taasi oo qiima dhac ku keenta ganacsiga dhofka iyo wax soo saarka soomaaliya.
Ugu danbeentii waxa kulanka soo xiray Gudoomiyaha Rugta ganacsiga mudane Maxamud Cabdi Cali (Gabeyre) waxaa uuna labada dhinacba kula dar daarmay in ay dhamaan masuuliyad iska saaraan hormarinta iyo ilaalinta bad qabka tayada ganacsiga dalka la kenayo ama laga dhofinaayo iyo waliba midka gudaha laga soo saaro.